About | Rice Seed Sector Development
Why we do What we do... ကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ ဘာကြောင့်လုပ်နေသလဲ
Use of quality seed isakey bottleneck in the rice seed value chain
အရည်အသွေးပြည့်မီသော မျိုးစေ့ကို အသုံးပြုခြင်းသည် စပါမျိုးစေ့ တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုကွင်းဆက်၏ အဓိကကျသော အကြောင်းရင်းတခု ဖြစ်သည်
Quality seed isakey input for increasing crop productivity, and experts generally estimate that 50% of the yield gap can be closed through the use of quality seed of improved and well adapted varieties. The use of quality seed of well performing rice varieties is one of the key bottlenecks in the rice value chain in Myanmar. A recent study on the rice seed supply and demand system in the Ayeyarwady Delta showed that the majority of farmers – 96 percent in the lower Delta and 70 percent in the upper Delta – source rice seed from their own fields or from other informal sources.
အရည်အသွေးကောင်းမျိုးစေ့သည် သီးနှံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုတိုးလာစေမည့် အဓိကသွင်းအားစုဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်၍ ဒေသနှင့် ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ထားသော စပါးမျိုးစေ့ မျိုးကွဲများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အထွက်နှုန်းကွာဟမှု ၅၀% ကို ထိန်းထားနိုင်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများမှ ယေဘူယျခန့်မှန်းကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ကောင်းမွန်သော စပါးမျိုးစေ့များကို အသုံးပြုခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှု ကွင်းဆက်၏ အဓိက အကြောင်းအရာများထဲမှ တခုဖြစ်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အောက်ပိုင်းမှ ၉၆% နှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအထက်ပိုင်းမှ ၇၀% သော လယ်သမားအများစုသည် ၎င်းတို့၏ လယ်မှထွက်သောစပါးများ (သို့မဟုတ်) အခြားသော ပြင်ပအရင်းအမြစ်များမှ ရရှိသော မျိုးစပါးများကို အသုံးပြုနေကြသည်ဟု ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ မျိုးစပါးဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားစနစ်ကိုလေ့လာခြင်း စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Increasing farmers’ access to quality seed contributing to improved agricultural productivity
အရည်အသွေးပြည့်မီသော စပါးမျိုးစေ့များကို တောင်သူလယ်သမားများ အလွယ်တကူ ရရှိစေခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များကို တိုးတက်ထုတ်လုပ် နိုင်စေရန်
Use of quality seed isakey bottleneck in the rice seed value chainThe goal of the project on Rice Seed Sector Development in the Ayeyarwady Delta (RSSD project) is to contribute to increasing sustainable agricultural production by farmers by improving female and male farmers’ access to and uptake of quality seed of improved and well adapted varieties. The project aims to strengthen the rice seed value, strengthening the performance of different operators and service providers, increasing demand orientation, and improving coordination among seed value chain actors. From October 2017 until June 2019, the project will focus on the following four main areas:
ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၌ စပါးမျိုးစေ့ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက် (RSSD Project) ၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်သည် အရည်အသွေးမြင့် ကောင်းမွန်သော စပါးမျိုးးကွဲးများကို အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား လယ်သမားများမှ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီပြီး အသုံးပြုနိုင်ခွင့် တိုးမြှင့်လာစေခြင်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့်ခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤစီမံချက်သည် တခြားသောလုပ်ဆောင်သူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးပေးသူများကို အားကောင်းလာစေခြင်း၊ ဝယ်လိုအားမြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် စပါးမျိုးစေ့တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှု ကွင်းဆက်တွင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်နေသူများအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုများအား မြှင့်တင်ပေး၍ စပါးမျိုးစေ့တန်ဖိုး တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ အထိ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ကြီး လေးခုကို အလေးထားလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Component 1 လုပ်ငန်းစဉ် ၁
Supporting seed farms on Early Generation Seed production
အခြေခံမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်နေသည့် မျိုးသန့်ခြံများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
Government seed farms are facing challenges in providing certified seed producers in the region with sufficient quantity and quality of early generation seed, i.e. foundation seed and registered seed. The first project component aims to contribute to improving the capacity, infrastructure and management of the seed farms operating in the Ayeyarwady Delta
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ မျိုးသန့်ခြံများသည် ဒေသတွင်းစီးပွားဖြစ် မျိုးသန့်မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်သူများအား အရည်အသွေးကောင်း အခြေခံမျိုးသန့် မျိုးစေ့များကို လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပေသည်။ ဤစီမံကိန်း၏ ပထမ အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် မျိုးသန့်ခြံများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ တိုးတက်လာစေရန် ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Component2လုပ်ငန်းစဉ် ၂
Supporting Seed Business Development
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
Seed growers are having difficulties in providing farmers with sufficient quantity and quality of seed. The second project component aims to improve seed business performance of seed producers in the region, with specific focus on Labutta, Bogale, Mawlamynegyun and Pathein townships. The project will work in these townships with seed producers operating at local scale, as well as with larger domestic enterprises producing and marketing rice seed in the Ayeyarwady Delta.
မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများသည် အခြားလယ်သမားများအား အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် မျိုးသန့်မျိုးစေ့များကို ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ရောင်းချနိုင်ရန် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေ ရပေသည်။ စီမံကိန်း၏ ဒုတိယ အစိတ်အပိုင်းသည် ဒေသတွင်း (အထူးသဖြင့် လပွတ္တာ၊ ဘိုကလေး၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းနှင့် ပုသိမ်မြို့နယ်များရှိ) မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများ၏ မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ စီမံကိန်းသည် ထိုမြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသော မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်သာမက ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ၌ စပါးမျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည့် ပိုမိုကြီးမားသော ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပါ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
Component3လုပ်ငန်းစဉ်် ၃
Strengthening Seed Quality Assurance
မျိုးစေ့အရည်အသွေး စစ်ဆေးအာမခံခြင်းစနစ် ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်
The current seed certification system does not have the capacity to support seed producers in assuring the quality of the seed produced. The third project component supports strengthening of the current seed quality assurance system, including strengthening the capacity of staff involved, as well as strengthening infrastructural facilities. Also, the project will look into alternatives for assuring seed quality. Moreover, seed growers will be strengthened in their internal seed quality control systems.
လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသောစနစ်သည် မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် မျိုးစေ့များ၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးအာမခံနိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်မရှိချေ။ ဤစီမံကိန်း၏ တတိယ အစိတ်အပိုင်းသည် ထိုစနစ်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေကြသော ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ထိုသို့ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသောစနစ်ကို ပိုမို အားကောင်းလာစေမည် ဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းသည် မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးအာမခံမည့် တခြားသောနည်းလမ်းများကိုလည်း ဆန်းစစ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများ၏ မျိုးစေ့အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Component4လုပ်ငန်းစဉ် ၄
Strengthening Seed Sector Co-ordination
စပါးမျိုးစေ့ကဏ္ဍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းလာစေရန်
Seed sector stakeholders in the region experience lack of coordination and collaboration in the rice seed value chain. A seed sector platform will support sharing of experiences and innovations, alignment of investments and activities, improved collaboration, avoidance of overlap of interventions and increased efficiency. Activities in the Ayeyarwady Delta will align with the Myanmar seed sector road map and the associated action plan.
ဒေသတွင်း မျိုးစေ့ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူများသည် စပါးမျိုးစေ့တန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှုကွင်းဆက်တွင် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ စပါးမျိုးစေ့ကဏ္ဍရပ်ဝန်းသည် အတွေ့အကြုံများနှင့် ဆန်းသစ်မှုများကို ဝေမျှခြင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ချိန်ညှိခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ထပ်တူကျနေသည့် လုပ်ငန်းများကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန် စသော လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ထောက်ပံ့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြန်မာ့စပါးမျိုးစေ့ကဏ္ဍ လမ်းပြမြေပုံနှင့် ၎င်း၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။